आक्रोशित हुँदै देउवाले भने-‘गठबन्धन नगरी चुनाव जित्ने हिम्मत छ ? ठूला कुरा गर्ने ?'
आक्रोशित हुँदै देउवाले भने-‘गठबन्धन नगरी चुनाव जित्ने हिम्मत छ ? ठूला कुरा गर्ने ?’
नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चुनावमा गठबन्धन गर्न हुँदैन भन्ने नेताहरूप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । उनले ठूला कुरा नगर्न चेतावनी दिए ।केन्द्रीय कार्य समितिको शुक्रवारको बैठक समापन गर्ने क्रममा सभापति देउवा आक्रोशित मुद्रामा प्रस्तुत भएका थिए ।
देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै एक केन्द्रीय सदस्यले भने ‘म नेविसंघ सभापति हुँदादेखि चितवनबारे थाहा छ । चितवनमा कहिले जित्या छ ? गठबन्धन नगर्दा चितवन जिताउने हिम्मत छ ? गठबन्धन नगर्ने हो भने फेरि हार्छ चितवन, मलाई थाहा छैन ?
सभापति देउवाको भनाइबाट केन्द्रीय सदस्यहरू भने चकित भएका थिए । जबकि २०४८ देखि चितवनमा कांग्रेसले सधैँ जित्दै आएको छ । २०६४ र २०७४ मा मात्र पराजित भएको हो ।